विचार / विश्लेषण कांग्रेसलाई ओलीको कटाक्ष: थाप्लोमा डाम बस्नेगरी दाहाललाई किन चुइँ चुइँ गरी बोकेको ? (भिडियो)
Monday, 26 Dec, 2016 2:31 PM
नेपाल गरिव हुन सक्ने देश होइन बलजफ्ती बनाइयो । नेपाली गरिव हुन सक्ने जनता होइनन् बलजफ्ती गरिव बनाइयो । नेपाली अनपढा र अशिक्षित हुने नागरिक होइनन्, यी ज्ञानी पूर्खाका सन्तान हुन् । जतिवेला संसार अन्धकारमा थियो । त्यतिवेला यहाँ चेतनाको ज्योति बलेको थियो । हाम्रा पूर्खाहरु ग्रह नक्षत्रको गणना गर्थे । ताराहरु कहाँ छन्, नक्षत्रहरु कहाँ छन्, तिनको अवस्थिति के छ, तिनको प्रभाव के छ, त्यसको विश्लेषण गर्थे । आयुर्बेदिक विज्ञान, औषधी विज्ञान, उपचार विज्ञान, दुनियाँले कतै अत्तोपत्तो नपाउँदा ती विज्ञानहरु यहाँ विकसित भएका थिए । कुन विरुवाको जरो कुन रोगका लागि औषधी हुन्छ ? कुन विरुवाको पात, कुनको फूल, कसको फल केको उपचारमा काम लाग्छ भन्ने कुराहरु हाम्रा पूर्खाले हजारौं वर्षको अभ्यासबाट पत्ता लगाएका थिए । दुनियाँमा अक्षर आविश्कार नहुँदा हाम्रा पूर्खाहरु विद्वताको स्थितिमा थिए । तर दुर्भाग्यवस केही शताब्दीयता हामीलाई पछाडि पारियो । हाम्रो पार्टीले स्थापना कालदेखि अव नेपालको गरिवीलाई मान्न सकिंदैन, यस पछौटेपनलाई मान्न सकिंदैन भन्ने मान्यता अघि बढायो । तर, यहाँहरुलाई थाहा छ नराम्रो काम गरेर सरकार हट्ने होइन राम्रो काम गरे सरकार हट्छ । किनभने नराम्रो काम गर्नेहरु थर्कमान हुन्छन् । देशी विदेशीहरु थर्कमान हुन्छन् । अहिले पनि नेताहरुको मिटिङ हुँदा म उहाँहरुलाई सोध्छु– मलाई तपाईंहरुले सरकारबाट किन हटाएको रे ? उहाँहरु भन्नुहुन्छ– सिध्याउन आँटेपछि के गर्ने त ? खतम पार्न आँटेपछि के गर्ने त ? अलिक समय बस्न दिने हो भने बुढाबुढीको भोट यसै पनि अरुलाई जाँदै नजाने भो । तर म सोध्छु– के बुढाबुढीलाई भोकै मर्न दिने ? यहाँका बाटा बनाउन, यहाँका स्कूल बनाउन, यहाँका अस्पताल बनाउन, यहाँका पुल, कुलो बनाउन हाम्रा पूर्खाले पसिना खर्च गरेका छन् । हाम्रा बा आमा, हजुरबा हजुरआमाहरुले यस्तो योगदान गरेका छन् भने हामीले सम्मान गर्नु परेन ? त्यो सम्मान गरेकाले हामीलाई सरकारबाट हटाइएको ? एमालेलाई रोके विकास रोकिन्छ
रेल पनि ल्याउँछु भन्या छ, सुरु गर्या छ । पूर्व पश्चिम रेल चलाउँछु भन्या छ, चीनतिरको बाटो खोल्या छ । चीनतिरबाट पनि समुद्रमा जाने भएको छ, यो त उधुमै हुने भो । नेपालमै पेट्रोलियम अन्वेषण गरेर खानी निकाल्या छ । नवलपरासीमा फलाम खानी पत्ता लगाएर नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने भन्या छ । यही तनहुँको ढोरचुँदीमा फलाम र तामा खानी छ । मैले अस्ती गएर हेरेँ । सय वर्षअगाडिजसो नै त्यहाँको फलाम निकालेर आरनमा कुटेर झोलुङ्गे पुल बनाएको रहेछ । सयौं वर्ष अघिदेखि फलाम कुटेर झोलुङ्गे पुल बनाएको छ । फलामको पहाड छ, सरकारहरु कानमा तेल हालेर सुतेर घ्वार घ्वार निदाएर बस्या छन् । त्यो निकाल्न थालेपछि राजनीतिक पार्टीहरु आत्तिए । किन हट्नु पर्यो सरकारबाट भन्दा नराम्रो काम गरेर होइन, राम्रो काम गरेर । तपाईंहरुले टेलिभिजनमा पनि हेर्नु भो होला । मैले बडा खुसीका साथ राजीनामा दिएँ । नेकपा एमालेलाई एकछिन् सरकारबाट हटाउँदैमा यस पार्टीलाई कसले हटाउन सक्दो रहेछ त भनेर त्यो परीक्षण नै गर्या हो । मैले राजीनामा गरेँ, तर नेकपा एमालेलाई सकैले रोक्न सक्दैन । किन रोक्न सक्दैन भने– एमालेलाई रोक्ने हो भने विकास रोकिन्छ । एमालेलाई रोक्ने हो भने परिवर्तन रोकिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्गलाई हामीले दुईतिरबाट दुई दुई लेनको गरी चार लेनको बनाउने भनेका छौं । एमाले बाहेक कसैसँग त्यो काम गर्ने हुती छ ? क्षमता छ ? यहाँ मध्यपहाडी राजमार्ग चौडा बनाउनु छ, छिटो पिच गर्नु छ । ढोरपाटनसम्म बाटो मजाले पुर्याउनु पर्ने छ । यहाँ पर्यटनको विकास गर्नु पर्या छ । महिला बालबालिकाहरुको उन्नती गर्नु छ, स्कूल बनाउनु छ । स्वास्थ्यचौकीहरु बनाउनु छ, अस्पतालहरु बनाउनु पर्ने छ । उद्योगहरुको स्थापना गर्नु छ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने छ । यी काम गर्नका लागि पुष्पकमलको भारी बोकेर हिंड्ने ? राजनीति सम्भावनाको खेल होइन म यो भन्दा अगाडि ढोरपाटन पुगेर आएँ । असाधारण पर्यटकीय सम्भावना छ । बुर्तीवाङदेखि ढोरपाटनसम्मको ३५ किलोमिटर बाटोलाई चौडा बनाउनु पर्ने छ । बीचमा पुल बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेँ । यहाँ अनेक प्रकारका पर्यटकीय विकासको सम्भावना छ । नेकपा एमाले राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल मान्दैन । राजनीति देश बनाउने सिंढी हो । राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो । नेकपा एमाले देश बचाउने, देश बनाउने र जनताको सुख समृद्धिका लागि काम गर्ने पार्टी हो । जनतालाई हक, अधिकार, सुरक्षा, सम्मानको अवसर उपलब्ध गराउने पार्टी हो । अलिकति हिमाली भेगतिर गए भने नेकपा एमाले हिमाल विरोधी पार्टी हो भनेर फलाक्छन् । तराई झरे भने तराई विरोधी छ भनेर हल्ला गर्छन् । पश्चिमतिर गए भने पश्चिम विरोधी छ एमाले भन्छन् । जनजातिकोमा आए भने जनजाति विरोधी छ भन्छन् । अलिकति हिन्दु खालका मान्छे देखे भने एमाले त हिन्दु विरोधी नास्तिक पार्टी हो भन्छन् । हिन्दु बाहेकका अरु धर्म मान्ने भेटिए भने एमाले हिन्दुवादी पार्टी हो भन्छन् । अर्थात् जनतामा भ्रम फिंजाउँछन् । नेकपा एमालेका विरुद्ध कुनै आरोपहरु सत्य छैनन् । एमालेले नराम्रो गर्यो भन्ने आरोप छैन । तराईका बारेमा नराम्रो हल्ला चलाइयो– केपी ओलीले युपि जाउ भन्यो, बिहार जाउ भन्यो । कहिले भनेछ ? केही पनि भन्ने ठाउँ र आरोप लगाउने ठाउँ नभेटेपछि बिहार जाउ, युपि जाउ भन्यो भन्ने हल्ला लिएर गएका छन् । एउटा शब्द गलत ढंगले प्रयोग गर्ने र हल्ला लिएर जाने । यसरी मधेस विरोधी हो एमाले भन्ने गरिएको छ । यो पनि मधेस विरोध हो ? अहिलेसम्म १९ वर्षमा नबनेको हुलाकी राजमार्ग ४ अर्व १० करोड छुट्याएर ठेक्का लगाएर बनाउन सुरु गरिएको छ, तराई विरोधी भो ? त्यो हुलाकी मार्ग तराईको तल्लो भागबाट जान्छ । पूर्व पश्चिम रेल तराईमा चलाउने भनेर सर्वे गरेको छ, बजेट छुट्याइएको छ । त्यो पूर्व–पश्चिम रेल हिमालका डाँडा डाँडाबाट जान्छ ? तराईबाट जाने होइन ? पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छ लेनको बनाउने भनेर प्रस्तावमा पारिएको छ र बजेट छुट्याइएको छ । त्यो राजमार्ग कहाँ छ पहाडमा छ ? अर्काे राजमार्ग सुनसरीको चतराबाट हेटौंडासम्म ल्याउने भनेका छौं, त्यो पनि तराईमै छ । यस वर्ष मात्रै २० हजार घर बनाएर सरकारका तर्फबाट गरिवहरुलाई वितरण गर्ने योजना राखिया छ । दलित र लोपोन्मुख जातिका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गरिदिने काम तराई विरोधी भयो ? जेष्ठ नागरिक भत्ता के पहाडकालाई मात्रै दिने भन्या छ ? तराईकालाई दिने भन्या छैन ? १५ वर्ष भित्र सबै स्रोतहरु प्रयोग गरेर तराईका सबै खेतमा सिंचाइको प्रवन्ध गर्ने कुरा गरिएको छ । भन्ने ठाउँ बोल्ने ठाउँ केही छैन तर, भ्रम सिर्जना गर्ने मात्रै काम गरिरहेका छन् । जनतालाई अल्मल्याउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । हजुरआमा ! यो जेष्ठ नागरिक भत्ता आयो भनेर घरमा पुर्याउन आएपछि एमालेको सरकार आएछ कि क्या हो बाबु ! भन्ने अवस्था भयो । जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता पुर्याउनु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । तपाईंको खेतमा पानी पुर्याउनु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । तपाईंको गाउँमा बाटो लानु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । तपाईंका खोलामा पुल हाल्नु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ ।
तर, आज जनता भ्रम भन्दा अलिकति माथि उठेको छ । नेकपा एमाले मात्रै होइन जसले यी कुराहरु देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ उहाँहरु स्पष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरु ठान्नुहुन्छ– पार्टी त एमाले नै ठीक हो । नीति त एमालेकै ठीक हो । तर, गर्ने के ? आफू अर्कै पार्टीको परियो । तर, म भन्न चाहन्छु– एमाले तपाईंहरुको पार्टी हो । एमालेमा लागेपछि मनमा लागेको कुरा ठीक हो भन्न पाइन्छ । एमालेमा लागेर जालझेल गर्नु पर्दैन, झुठ बोल्नु पर्दैन । साँचो कुरा बोले हुन्छ एमालेमा । अरु पार्टीमा कस्तो छ ? कुरा त साँचो हो भन्न मिलेन, भन्नु पर्ने अवस्था छ । हामी यस देशको विकास गर्छाैं । बालबालिकाहरुलाई कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ, उनीहरुलाई कसरी विद्यालय पुर्याउने त्यसमा हाम्रो चिन्ता छ । ढोरपाटनमा प्राथमिक विद्यालय मात्रै छ । माध्यमिक विद्यालयमा पुग्न त्यहाँबाट धेरै किलोमिटर बाटो हिंड्नु पर्छ । बालबालिका हिंडेर स्कूल जान सक्दैनन् । यसको प्रवन्ध कसरी मलिाउने ? हाम्रो ध्यान त्यता छ । ढोरपाटन आएर हेर्नु नि तपाईंहरुलाई एउटा कुरा वताउँ– एउटा हल्ला चलाइएको छ तराईमा । घरका छेउमा स्कूल छन्, घरछेउमा मोटरबाटो छ । अस्पताल अलिकति पर्तिर छ । यहाँ ठगियौं, त्यहाँ ठगियौं, हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक भयौं भनिन्छ । ढोरपाटन आएर हेरे हुन्थ्यो नि सकिन्छ भने । अनि पहाडले लुट्यो, ढोरपाटनले लुट्यो भन्ने ? प्रावि भन्दा माथि छोराछोरी पढाउने ठाउँ छैन । पहाडका जनताले यो भोग्या छन् । त्यो थाहा छैन । नेता हुँ भन्या छ, पहाडले ठग्यो लुट्यो भन्या छ । यो त मैले दृष्टान्त मात्रै दिएको हुँ । यो भन्दा चरम अप्ठ्यारा ठाउँ छन्, त्यहाँका जनताले ती अप्ठ्यारा भोगिरहेका छन् । सरकारमा बस्ने मान्छे नै भनिराख्या छन्– अहिले यो पारित गर्ने, यति भएपछि फेरि अर्काे वितण्डा खडा गर्ने । अर्थात् नेपालमा शान्ति हुन नदिने । नेपाली जनतालाई आरामको निद्रा सुत्न नदिने । विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न नदिने । अल्झाउने, समस्या खडा गरिरहने, अल्मल्याइरहने र विकासलाई अवरोध गरिरहने । एउटा भ्रम फेरि अहिले छर्ने गरिएको छ– आउ न भोटमा आउ । उहाँहरुलाई बेच्न राखेको सागसब्जी जस्तै लागेको छ सांसद । किनिएलान्, यताउता गरौंला अनि पास गरौंला भनेर । नेकपा एमालेले भोट हालेर देशको अस्तित्व समाप्त भएका उदाहरण देख्या छ ।
गत वर्ष यस देशले सरकार छ कि भनेजस्तो थाहा पायो । त्यस भन्दा अगाडि सरकार छ भन्ने कुरा बिजुलीको पैसा, पानीको पैसा र स्कूलको फि तिर्दा मात्रै थाहा पाउँथे । हजुरआमा ! यो जेष्ठ नागरिक भत्ता आयो भनेर घरमा पुर्याउन आएपछि एमालेको सरकार आएछ कि क्या हो बाबु ! भन्ने अवस्था भयो । जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता पुर्याउनु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । तपाईंको खेतमा पानी पुर्याउनु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । तपाईंको गाउँमा बाटो लानु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । तपाईंका खोलामा पुल हाल्नु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । तपाईंका ठाउँको विकास गर्नु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । यहाँ उद्योगहरु विस्तार गर्नु छ भने एमालेको सरकार चाहिन्छ । नेपालले आफ्नो विकास गर्न सक्छ, हामीसँग साधन स्रोत छन् । तर, सरकारले संयोजन गरेन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन । त्यसै कारण गत वर्ष मैले एउटा घोषणा गरेँ–धनी हुन मन छ भने तपाईंहरु काम गर्नुस्, मेहेनत गर्नुस् । भातै खाने हो भने सरकारका तर्फबाट मैले ख्वाउने जिम्मा लिन्छु । सरकार भनेपछि कर्तब्य हुन्छ, केही जिम्मेवारी हुन्छ । भात खुवाउने मात्रै काम त सरकारले गर्न सक्छ र गर्छ । मैले गत वर्ष यो घोषणा नै गर्या थिएँ । तर, सुती सुती भात मात्रै खाएर हामी अगाडि जान सक्दैनौं । हामीले त देश बनाउनु छ, समृद्ध बनाउनु छ, अगाडि बढाउनु छ । यस कारण हामीले काम गर्नु पर्छ । जसले काम गर्न सक्दैन, काम गर्न नसक्नेलाई भोकै पर्न दिनु हुँदैन सरकारले । जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकार सरकारै होइन । त्यसकारण हामीले भनेका छौं– उत्तरदायी सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्ने सरकार । विचित्रको, उल्टो र अनौठो बाटो हामीले संविधान बनाइसक्यौं । अप्ठ्याराका बीच बनायौं । हामीले संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनावमा जानु पर्ने छ । तर, यो सरकार हेर्नुस् त के गर्दैछ ? गराउनु पर्ने छ चुनाव, उहाँहरु गर्दै हुनुहुन्छ संविधान संशोधन । संविधान संशोधनको उहाँहरुको यो प्रस्तावसँग चुनावको कुनै सरोकार छैन, कुनै सम्बन्धै छैन । संशोधनमा हालेका चारवटा बुँदासँग चुनावको कुनै सम्बन्ध छैन । यो सरकार संविधान बमोजिमका संरचनाहरुको चुनाव गराउने संक्रमणकालीन सरकार हो । यो संसद् रुपान्तरित ब्यवस्थापिका संसद हो । यो संसदको काम के हो र यो सरकारको काम के हो ? जानु पर्ने एकातिर छ, सरकार भागेको छ अर्कैतिर । सरकार किन भागेको छ भने न यो सरकार नेपालीले बनाएको हो, न यसलाई नेपालको मतलव छ । तपाईंहरुले सुन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजेले आजकल निकै कडा कडा बोलिरहनु भएको छ । केही केही साथीहरुले अस्तीको बैठकमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे जे पायो त्यही बोल्दै हिंड्नु भएन नि भने । कत्रो कत्रो उत्पात मच्चाएर हिंड्या मान्छेलाई यो बोल्नु त के भो र ? के के गर्या मान्छे हो उहाँ । तपाईंहरु आफैं जान्नुहुन्छ । त्यस्तो मान्छेले यत्तिको बोल्या भन्या त ठीकै छ भैगो भने हुन्छ । म सरकारलाई भन्न चाहन्छु– यो विचित्रको, अनौठो उल्टो, नेपाली जनतालाई नचाहिएको, अझ नेपाली जनताले विरोध गरेको, नेपालको हितमा नभएको काम तर्फ अगाडि नबढोस् । उहाँहरु चुनावको बाटोमा जानु पर्यो । तर, जानुहुन्न । उता सर्लाही महोत्तरीतिरका एक दुईजना मान्छेलाई देखाएर ५ नम्बर प्रदेश छुट्याउनु पर्छ भनेर संविधान संशोधनतिर जानु भएको छ । त्यहाँका मान्छेले भनेको होइन । त्यहाँका जनता विरोधमा उर्लेको छ । त्यहाँका जनता हामीलाई नछुट्याइदेउ भन्छन् । हामी मिलेर बस्छौं भन्छन् । तराईको मधेसी, पहाडको पहाडी, हिमालको हिमाली, सयौं जाति जनजाति, सबै हामी नेपाली मिलेर बस्छौं भन्छन् । हामीलाई फुट्नु परेको छैन, कसका लागि गर्दैछौ–त्यहाँका मान्छे सोध्दैछन् । सुन्छु– सर्लाही कि महोत्तरी तिरको कसैले भन्छ– नभै भएन कि नभै भएन । अनि त्यही कुरा पूरा गर्न सरकार लागि पर्या छ । देशले मान्दैन, त्यहाँको जनताले मानेको छैन । सर्लाही महोत्तरीको जनताले पनि त्यो मान्दैन, त्यहाँका एक दुईजना मान्छेले भन्छन्– त्यो फुटाउनै पर्छ । नेपालको अहित हुनेगरी, नेपाली जनतालाई आघात पर्नेगरी र नेपालको अखण्डतालाई असर पुर्याउनेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । यो संशोधन प्रस्ताव अन्तिम होइन । यो भन्दा अगाडि संविधान जारी भएको दुई चार दिनमै नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । यति भएपछि हुन्छ भन्थ्यो कांग्रेस । सबैले भनेपछि देशका विरुद्ध साह्रै बढ्ता नोक्सान गर्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले भैगो नि त भनेर पारित गर्यौं । यो अन्तिम हो र त्यसपछि हामी चुनावमा जान्छौं सबैले भनेका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट जस्ताको तस्तै । अहिले तपाईंहरुले सुन्नु भएको होला । सरकारमा बस्ने मान्छे नै भनिराख्या छन्– अहिले यो पारित गर्ने, यति भएपछि फेरि अर्काे वितण्डा खडा गर्ने । अर्थात् नेपालमा शान्ति हुन नदिने । नेपाली जनतालाई आरामको निद्रा सुत्न नदिने । विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न नदिने । अल्झाउने, समस्या खडा गरिरहने, अल्मल्याइरहने र विकासलाई अवरोध गरिरहने । हेर्नुस् त ! एक पल्ट यस देशमा माओवादीको बिगबिगी । बोलि नसक्नु । धेरै मान्छेले मैले बोल्दा भने– मार्छन् चुप लाग्नुस् । एमालेजस्तो पार्टी ३३ सिटमा । हेरि हेरिकन शान्तिपूर्ण ढंगले सबै कब्जा । काठमाडौं जस्ता सुगम ठाउँमा ८० प्रतिशत पनि भोट खसेन । गोरखामा ४६ हजार मतदाता, ४८ हजार कि कति भोट पायो । मलेसिया र अरवमा भएकाले मात्रै होइन, स्वर्ग गएकाले पनि भोट खसाले । कस्तो जमाना थियो माओवादीको ? संविधान संशोधन हुन दिंदैनौं हामीले भनेका छौं– अव नेपाली जनतालाई गरिव बनाएर राख्न पाइंदैन । नेपाली जनता अव विकास सम्पन्न हुन्छन् । अवसर प्राप्त गर्छन्, गरेका छन् । त्यसलाई हामी ब्यवहारिक रुप दिन्छौं । अव सुरक्षा र सम्मानका साथ सामाजिक न्यायको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै हामी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छौं । दाजुभाइ दिदी बहिनीहरु ! एमालेको बारेमा तपाईंहरु कसैले भ्रम राख्नु पर्दैन । एमालेका नीति के होलान् ? के गर्छ होला एमालेले ? यसो गर्ला कि त्यसो गर्ला ? तपाईं यसो मनमा सोच्नुस्– यो गर्दा ठीक हुन्छ देशका लागि, त्यही हो एमालेको नीति । देशको भलो जे गर्दा हुन्छ, जनताको भलो जे गर्दा हुन्छ । देश जे गर्दा मजबुत हुन्छ, यस देशको एकता जे गर्दा हुन्छ । यस देशलाई समृद्धिको बाटोमा जसरी लान सकिन्छ । यस देशका जनताको मुहारमा खुसी र मुस्कान जसरी ल्याउन सकिन्छ । त्यही बाटो एमालेको बाटो हो, त्यही नीति एमालेको नीति हो । ढुक्क हुनुस् । यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्छ कि गर्दैन होला एमालेले ? तपाईंहरु कुनै भ्रममा नरहनुहोला । कुनै हालतमा पास हँदैन, पास हुन दिंदैन एमालेले । किन हुन दिंदैन ? यस कारण कि यो देशको हितमा छैन । नेपालीको हितमा छैन । यो नेपालीको माग होइन, अरु कसैको होला । नेपालीलाई चाहिएको छैन । कल्लाई चाहिएको हो हामीलाई थाहा छैन, उहाँहरुलाई थाहा छ । त्यसो भएको हुनाले एमालेले यसलाई पास गर्दैन, पास गर्न दिंदैन– हामीले स्प्ष्ट भनेका छौं । लाठी छेड्दैनौं
एउटा भ्रम फेरि अहिले छर्ने गरिएको छ– आउ न भोटमा आउ । उहाँहरुलाई बेच्न राखेको सागसब्जी जस्तै लागेको छ सांसद । किनिएलान्, यताउता गरौंला अनि पास गरौंला भनेर । नेकपा एमालेले भोट हालेर देशको अस्तित्व समाप्त भएका उदाहरण देख्या छ । आफ्नै आँखाले देख्या छ– भोट हाली हालीकन राष्ट्रको अस्तित्व सिद्धिएको । हामीलाई भन्छन्– आउ न, भोटमा आउ । एउटा बलियो मान्छे छ, एउटा दुब्लो पातलो मान्छे छ । दुब्लाले के गर्ने लाठी समाउनु पर्यो । बलियाले दुब्लालाई भन्छ– लाठी समाउने काँतर ? वान टु वान आइज ! ऊ बलियो छ । बलियाले त किचकाच पारिहाल्छ । निमोठनामोठ पारिहाल्छ । त्यस कारण दुब्लाले लाठी फ्याँक्दैन । लाठी फ्याँक्ने वितिक्कै के हुन्छ भन्ने दुब्लालाई थाहा छ । बलियाले किन भन्छ ? लाठी फ्याँकेर आइज, मैदानमा खेलौं, एक्ला एक्लै खेलौं, उफ्रेर खेलौं । हामीलाई उफ्री उफ्री खेल्नु पर्या छैन । हामी राष्ट्रिय हितलाई तलमाथि पर्न दिंदैनौं, त्यत्ति थाहा छ । त्यसकारण यो छलफलमा पनि जाँदैन, पास पनि हुँदैन । कतिपय अवस्थामा संसद अवरोध हुने गरेका थिए हिजो । यो प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव, यसो र उसो भनेर अनेक प्रकारका भ्रम फिंजाउने प्रयासहरु भएका थिए । संसद अवरुद्ध गरिने गरेको थियो । तर, यसपल्ट राष्ट्रियताको प्रश्न छ, संविधानको प्रश्न छ । प्रादेशिक सभा नबनिकन प्रदेशका सीमानामा छलफल गर्न सकिंदैन भनेर संविधानले ब्यवस्था गर्या छ । संविधानको धारा २७४ ले स्प्ष्ट रुपमा ब्यवस्था गर्या छ । संविधानले निषेध गरेको कुरा कसैले जोर जुलुम गर्यो भनेर हामी त्यसलाई मिच्न दिंदैनौं । स्वर्गे भएकाले पनि भोट हाले तपाईंहरु भ्रममै नपर्नुस् अरु पार्टीको । हेर्नुस् त ! एक पल्ट यस देशमा माओवादीको बिगबिगी । कम्ति बिगबिगी भएन । बोलि नसक्नु । धेरै मान्छेले मैले बोल्दा भने– मार्छन् चुप लाग्नुस्, नबोल्नुस्, कम बोल्नुस् । बिगबिगी यस्तो थियो । एमालेजस्तो पार्टी ३३ सिटमा झर्ने । हेरि हेरिकन शान्तिपूर्ण ढंगले सबै कब्जा । गजव के भो ! कुनै पनि ठाउँमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी भोट खस्दैनथ्यो । काठमाडौं जस्ता सुगम ठाउँमा ८० प्रतिशत पनि खसेन । तराईका सुगम ठाउँमा ८० प्रतिशत खसेन । गोरखामा ४६ हजार मतदाता ४८ हजार कि कति भोट खस्यो । मलेसिया र अरवमा भएकाले मात्रै खसाल्ने होइन । २ वर्षअघि मरेर स्वर्ग गएकाले पनि भोट खसाले । कस्तो जमाना थियो माओवादीको ? कति लोकप्रिय होला ? एउटा जमाना त्यस्तो थियो । यो राजनीतिले होइन, आतंक नीतिले भएको थियो । म आग्रह गर्न चाहन्छु– अब, अझै पनि कुनै भ्रममा पर्नु पर्ने छ र ? इमानमा कांग्रेस नअडेर परिस्थिति बिग्रयो । नअड्दा नअड्दै, नअड्दा नअड्दै कांग्रेसले यतिवेला आएर माओवादीलाई थाप्लोमा नाम्लोको डाम बसाएर बोकेर हिंडेको छ । तालुमा नाम्लाको डाम बसाएर पुष्पकमल दाहाल बोकेर कांग्रेस चुइँ चुइँ हिंड्या छ । पुष्पकमललाई कति चुइँ चुइँ बोकेको ? नेपाली कांग्रेसलाई मैले धेरैपल्ट भनेँ । हिजै मात्रै पनि शेरबहादुर देउवासँग एउटा कार्याक्रममा भेट हुँदा मैले भनेँ–एमाले कांग्रेस जस्ता शक्तिहरु मिलेर नै यो देशमा गणतन्त्र आएको हो । यसलाई बचाउन हामी मिल्नु पर्छ भनेर नै कांग्रेसको नेतृत्वलाई अगाडि सार्यौं, हामी अगाडि सरेनौं । कांग्रेसलाई अगाडि सारेर संविधान बनायौं । कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सहमति अनुसार एमालेले नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो । अलि नराम्रो शब्द भन्नु भएन । राम्रो पारेर भन्दा बेइमान गर्यो त भन्नु भएन, नराम्रो सुनिन्छ । इमानमा अड्न सकेन भन्नु पर्यो । इमानमा कांग्रेस अड्न सकेन । परिस्थिति बिग्रयो । इमानमा नअड्दा नअड्दै, नअड्दा नअड्दै नेपाली कांग्रेसले यतिवेला आएर माओवादीलाई नाम्लो लाएर चुइँ चुइँ बोक्दै थाप्लोमा डाम बसाएर हिंडेको छ । तालुमा नाम्लाको डाम बसाएर पुष्पकमल दाहाल बोकेर चुइँ चुइँ गर्दै कांग्रेस हिंड्या छ । जवाफ के दिन्छ कांग्रेसले मलाई थाहा छैन । के भन्ला ? माथि पुग्न पर्या होला, प्रधानमन्त्री हुन पर्या होला, मन्त्री हुन पर्या होला, के गर्न पर्या होला । यहाँ तपाईंहरुलाई के गर्नु पर्यो र ? यहाँ मध्यपहाडी राजमार्ग चौडा बनाउनु छ, छिटो पिच गर्नु छ । ढोरपाटनसम्म बाटो मजाले पुर्याउनु पर्ने छ । यहाँ पर्यटनको विकास गर्नु पर्या छ । महिला बालबालिकाहरुको उन्नती गर्नु छ, स्कूल बनाउनु छ । स्वास्थ्यचौकीहरु बनाउनु छ, अस्पतालहरु बनाउनु पर्ने छ । उद्योगहरुको स्थापना गर्नु छ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने छ । यी काम गर्नका लागि पुष्पकमलको भारी बोकेर हिंड्ने ? म आग्रह गर्छु– अव अलमल नगरौं । अव कोल्टे फेर्ने समय आयो । देश अगाडि बढ्ने समय आयो, अव परम्परागत रुपमा चलेर हुँदैन । छ्वास्स सिन्दुर हालेर अव चल्दैन कति कतिले भनेको सुन्छु– एउटा पार्टीमा लागिहालियो अव के गर्नु । आज यहाँ एमाले प्रवेश गर्न तपाईंहरुले नाम लेखाउनु भएको छ । अर्काे पटक देखि यस्तो झन्झट नगर्नुस् । तपाईंहरु जुन जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, ब्यक्तिगत होइन कमिटी नै एमालेमा आउनुस् । पूर्वतिर एउटा चलन छ, यता छ कि छैन थाहा छैन । पूर्वतिर मेला लाग्दाखेरी कहिले कहिले केटाहरु मेलामा सिन्दुर यसो खल्तीमा हालेर जान्छन् । मन परेको केटी देखेपछि सिन्दुर छ्वास्स हाल्दिन्छन् र गुर्रर्र भाग्छन् । किन भाग्छन् भने उसको माइतीले भेट्टाएपछि त सोझ्याइहाल्छन् त्यहाँ । माइतीलाई आपत के भने सिन्दुर त हालि नै सक्यो । कल्ले हाल्यो, कस्तो, कहाँको केटो हो ? अनि खोजेर चेली जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो । आजको जमानामा अनेक पार्टीले झुक्याएर तपाईंहरुलाई यसो छ्वास्स सिन्दुर हाल्दिएका भरमा अव तपाईं त्यही पार्टीका पछाडि लुसु लुसु सधैं ? देश बनाउन लाग्नु परेन ? झुक्याएर हालेको सिन्दुर आजका जमानामा सदर हुन्छ ? सदर हुँदैन आजको जमानामा । त्यसैले म दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– तपाईंहरु अव अलमलमा नपर्नुस् । एमालेमा आउनुस् देश बनाऔं । (एमाले बाग्लुङको जिल्ला अधिवेशनका क्रममा ओलीले ब्यक्त गरेका विचारको अंश)